Ciyaartii Eto afgambiga Turkiga ayaa loo baajiyay - iftineducation.com
iftineducation.com – Laacibka reer Kaamuruun ee Samuel Eto ayaa ku dhawaaq in dib loo dhigay ilaa iyo wakhti kale ciyaartii ka dhici lahayd magaalada Antalya ee dakla Turkiga kaddib markii uu dalkaasi ka dhacay inqilaabkii dhicisoobay.
Ciyaartaas ayay ujeedadeedu ahayd in lacag loogu aruuriyo hay’add gargaar oo uu leeyahay Eto.
Ciyaaryahanno rabay in ay ka qaybqaataan ciyaarta ayaa haddaba ku sugan magaalada Antalya waxaana ka mid ah kuwo u dheella kooxda Antalyaspor ee dalka Turkiga.
Ciyaaryahanadaas hadda diyaarka ku ah waxaa ka mid ah Kanu Nwankwo, Jay-Jay Okocha, oo reer Nigeri ah, Stephen Appiah iyo Michael Essien oo reer Gaana ah iyo Kolo Toure oo reer Ivory Coast ah.
Waxaa kale oo jooga ciyaaryahanka Gaana ku dhashay Marcel Desailly, Carles Puyol, Deco iyo tababarihii hore ee England Fabio Capello, waxay qayb ka yihiin ciyaarta dhexmari lahayd xidigaha caalamka iyo xidigaha Turkiga.
Waxaa lagu aadiyay dabaaldaga 10 guuradii ka soo wareegtay markii Turkiga lagu aas aasay hay’adda Fundación Privada ee Samuel Eto.
Eto ayaa afar jeer noqday ciyaaryahanka Afrika ugu wanaagsan, ciyaartiisii tabarucaada ahayd in la baajiyayna wuxuu ku soo bandhigay baraha bulshada.
Waxaa la rajaynayay in ay ka soo qayb galaan Lionel Messi iyo Diego Maradona.